Isikhathi Somphakathi | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 1, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Nginenkinga yokuthola isikhathi phakathi nosuku lonke ukuze ngihlanganyele nabantu emphakathini, futhi ngiyabona ukuthi kuthatha inani labo kubantu engifinyelela kubo futhi ngixoxa nabo. I-Argyle Social ikhiphe le infographic ekhangayo ukusiza ukuqonda isayensi ngemuva kwesikhathi kanye nomthelela wayo ekusebenzeni kokumaketha kwezokuxhumana kwezamabhizinisi kuzo zombili ibhizinisi kumthengi (B2C) kanye nokumaketha kwezebhizinisi (B2B).
Kusuka ku-infographic: Ama-Brands afuna ukubeka isikhathi kokuthunyelwe ukufeza ukuzibandakanya okuphezulu. Kepha amakhasimende abo amukela nini kakhulu? Sihlole ingxenye yemininingwane yamakhasimende ethu - okuthunyelwe okungama-250k nokuchofoza okungu-5M - ukubona ukuthi singazithola yini izitayela ezihlanganisiwe.
Source: Ukukhangiswa kwemithombo yezokuxhumana okuqhutshwa yidatha kusuka ku-Argyle Social
Kukuphi Ukwethembeka Kwakho?
Ukukhuphuka Kokukhangisa Okungenayo
Nov 1, 2011 ngo-1: 23 PM
Siyabonga ngokwabelana ngocwaningo lwethu, Doug!
Nov 1, 2011 ngo-3: 26 PM
Uyabheja! Izinto ezinhle, Eric!
Nov 2, 2011 ngo-11: 16 PM
sawubona ngijabulele isiza futhi ngethemba ukuthi ngingayisebenzisa le mibono kusayithi lami!